လုံခြုံစိတ်ချရသောဖိနပ်နှင့်ဖိနပ်များအတွက်ပရီမီယံနည်းပညာ | AIRTOX
COOL&ME® အဆင့်မြင့်အအေးပေးစနစ်ဖြစ်သည်။ အပူပေးစနစ်နှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုထိန်းညှိရန်အတွက်စနစ်သည်ဒီဇိုင်းပုံစံကိုဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ထူးခြားသောဆx္ဌဂံပုံစံ microchannel တည်ဆောက်မှုကြောင့်ချွေးပေါက်များကိုသင်၏ခြေထောက်များမှအဆက်မပြတ်သယ်ဆောင်သွားပြီးသင်၏ခြေထောက်များကိုအငွေ့ပြန်စေပြီးခြောက်သွေ့စေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လတ်ဆတ်သောလေသည်အတွင်းပိုင်းကိုအလွယ်တကူဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ COOL&ME® သင်၏ဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်သည့်အခါသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်သင်၏ခြေနွေးနှင့်ချွေးထွက်လာခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
PowerBreeze® အများအပြားမှာအသုံးပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာ, အသက်ရှူနိုင်သောထည်ဖြစ်ပါတယ် Airtox ထုတ်ကုန်များ။ မတူဘဲ COOL&ME® စနစ်, PowerBreeze® စဉ်ဆက်မပြတ်လေစီးဆင်းမှုကိုခွင့်ပြုရန်ဖိနပ်၏အထက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒီမိုက်ကရိုရစ်သည်ဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်သည့်အခါချွေးထွက်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သောခံစားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ PowerBreeze® သင် ၀ တ်ဆင်သည့်အခါတိုင်းသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သောခံစားမှုဖြင့်သင့်ကိုအသက်ရှူစေနိုင်သည် Airtox.
WHITELAYER® ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုတစ်ခုထက်မကသည်နှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုသည် Airtox လုံခြုံရေးဖိနပ်လုပ်ငန်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဤထူးခြားသောသတ္တုမဟုတ်သော felted ထည်သည်ဖိနပ်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောဖိနပ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အမှန်တကယ်ယှဉ်ပြိုင်မှုမရှိသောအလွန်အမင်းအားကောင်းသော၊ အလင်း၊ WHITELAYER® မူလကအမေရိကန်စစ်တပ်၏ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ၀ တ်စုံအတွက် US တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုကတည်းက, WHITELAYER® ထပ်မံများအတွက်သီးသန့်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Airtox industries ယင်း၏အင်အားအကောင်းဆုံး anti-perforation အလွှာထဲသို့။
၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းရှိသင့်ခြေထောက်များအတွက်အလွန်အမင်းမြင့်မားသောကာကွယ်မှုပေးသည်။ WHITELAYER® သင့်ကိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးသက်သောင့်သက်သာသက်သာစေသည်။ ကဲ့သို့သောနည်းပညာများ၏အကူအညီဖြင့် WHITELAYER® , Airtox ပုံမှန်သင်တန်းဆရာများနှင့်လုံခြုံရေးဖိနပ်အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးနိုင်ခဲ့!
AQUA-CELL® ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်း -of-a- ကြင်နာ bi-အစိတ်အပိုင်းအမြှေးပါးစေသည် AIRTOX အကာအကွယ်ဖိနပ် 100% ရေစိုခံ။ ရာသီဥတုအလွန်ဆိုးရွားသည့်အချိန်တွင်ပင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးမိုးနှင့်စိုစွတ်သောအလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေများမှကာကွယ်ပေးသည်။ The AQUA-CELL® အမြှေးပါးကိုလည်း breathable ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်, AQUA-CELL® သင်၏ခြေထောက်ကိုခြောက်သွေ့ပြီးလတ်ဆတ်စေပါသည်။